काठमाडौं । स्वास्थ्य क्षेत्रमा विश्वका लागि ठूलो चुनौति बनेको कोरोना भाइरसको महामारीका कारण विश्वमा यो समाचार तयार पार्दासम्म ४ लाख ७९ हजार ८७९ जनाको मृत्यु भईसकेको छ भने ९३ लाख ५९ हजार २७८ जनालाई संक्रमण भएको छ ।
त्यस्तै ५० लाख ४६ हजार २६९ जना स्वास्थ्योपचार पछि निको भएका छन् भने विश्वमा ५८ हजार १३ जनाको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर रहेको छ ।
विश्वका २१३ वटा देशहरुमा आफ्नो प्रकोप फैलाईसकेको कोरोना भाइरसको महामारीका कारण अमेरिकामा १ लाख २३ हजार ४७५ जनाको मृत्यु भईसकेको छ भने २४ लाख २४ हजार ४१८ जनालाई संक्रमण भएको छ ।
त्यहाँ १० लाख २० हजार ४०३ जना स्वास्थ्योपचार पछि निको भएका छन् भने १६ हजार ५१० जनाको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर रहेको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा त्यहाँ २ जनाको मृत्यु भईसकेको छ भने २५० जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन् ।
त्यस्तै ब्राजिलमा अहिलेसम्म ११ लाख ५१ हजार ४७९ जनालाई संक्रमण भएको छ भने ५२ हजार ७७१जनाको मृत्यु भएको छ ।
त्यस्तै ब्राजिलमा ६ लाख १३ हजार ३४५ जना स्वास्थ्योपचार पछि निको भएका छन् भने ८ हजार ३१८ जनाको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर रहेको छ ।
त्यस्तै रुसमा कोरोना भाइरसको महामारीका कारण अहिलेसम्म ८ हजार ३५९ जनाको मृत्यु भईसकेको छ भने ५ लाख ९९ हजार ७०५ जनालाई संक्रमण भएको छ ।
त्यहाँ ३ लाख ५६ हजार ४२९ जना स्वास्थ्योपचार पछि निको भएका छन् भने २ हजार ३०० जनाको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर रहेको छ ।
त्यस्तै स्पेनमा कोरोना भाइरसको महामारीका कारण २८ हजार ३२५ जनाको मृत्यु भईसकेको छ भने २ लाख ९३ हजार ८३२ जनालाई संक्रमण भएको छ ।
त्यस्तै बेलायतमा कोरोना भाइरसको महामारीका कारण अहिलेसम्म ४२ हजार ९२७ जनाको मृत्यु भईसकेको छ भने ३ लाख ६ हजार २१० जनालाई संक्रमण भएको छ । त्यहाँ ३३० जनाको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर रहेको छ ।
त्यस्तै इटालीमा कोरोना भाइरसको महामारीका कारण अहिलेसम्म ३४ हजार ६७५ जनाको मृत्यु भईसकेको छ भने २ लाख ३८ हजार ८३३ जनालाई संक्रमण भएको छ ।
त्यहाँ १ लाख ८४ हजार ५८५ जना स्वास्थ्योपचार पछि निको भएका छन् भने ११५ जनाको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर रहेको छ ।
त्यस्तै फ्रान्समा कोरोना भाइरसको महामारीका कारण अहिलेसम्म २९ हजार ७२० जनाको मृत्यु भईसकेको छ भने १ लाख ६१ हजार २६७ जनालाई संक्रमण भएको छ । त्यहाँ ७४ हजार ८७१ जना स्वास्थ्योपचार पछि निको भएका छन् भने ६८२ जनाको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर रहेको छ ।
त्यस्तै जर्मनीमा कोरोना भाइरसको महामारीका कारण अहिलेसम्म ८ हजार ९८६ जनाको मृत्यु भएको छ भने १ लाख ९२ हजार ७७८ जनालाई संक्रमण भएको छ ।
त्यहाँ १ लाख ७५ हजार ७०० जना स्वास्थ्योपचार पछि निको भएका छन् भने ३३७ जनाको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर रहेको छ ।
त्यस्तै भारतमा कोरोना भाइरसको महामारीका कारण अहिलेसम्म १४ हजार ४८३ जनाको मृत्यु भईसकेको छ भने ४ लाख ५६ हजार १८३ जनालाई संक्रमण भएको छ ।
भारतमा २ लाख ५८ हजार ६८५ जना स्वास्थ्योपचार पछि निको भएका छन् भने ८ हजार ९४४ जनाको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर रहेको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा त्यहाँ ६८ जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन् ।
त्यस्तै वर्ल्डोमिटरले जनाए अनुसार टर्कीमा कोरोना भाइरसको महामारीबाट ५ हजार १ जनाको मृत्यु भईसकेको छ भने १ लाख ९० हजार १६५ जनालाई संक्रमण भएको छ । त्यस्तै त्यहाँ १ लाख ६२ हजार ८४८ जना स्वास्थ्योपचार पछि निको भएका छन् भने ८९३ जनाको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर रहेको छ ।
त्यस्तै पेरुमा कोरोना भाइरसको महामारीका कारण अहिलेसम्म ८ हजार ४०४ जनाको मृत्यु भईसकेको छ भने २ लाख ६० हजार ८१० जनालाई संक्रमण भएको छ । त्यहाँ १ लाख ४८ हजार ४३७ जना स्वास्थ्योपचार पछि निको भएका छन् भने १ हजार १४४ जनाको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर रहेको छ ।
त्यस्तै ईरानमा कोरोना भाइरसको महामारीका कारण अहिलेसम्म ९ हजार ८६३ जनाको मृत्यु भईसकेको छ भने २ लाख ९ हजार ९७० जनालाई संक्रमण भएको छ ।
त्यहाँ १ लाख ६९ हजार १६० जना स्वस्थ्योपचार पछि निको भएका छन् भने २ हजार ८४६ जनाको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर रहेको छ ।
त्यस्तै क्यानडामा ८ हजार ४५४ जनाको मृत्यु भईसकेको छ भने १ लाख १ हजार ९६३ जनालाई संक्रमण भएको छ ।
त्यहाँ ६४ हजार ७०४ जना स्वास्थ्योपचार पछि निको भएका छन् भने २ हजार ५८ जनाको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर रहेको छ ।
त्यस्तै मेक्सिकोमा कोरोना भाइरसको महामारीका काराण अहिलेसम्म २३ हजार ३७७ जनाको मृत्यु भईसकेको छ भने १ लाख ९१ हजार ४१० जनालाई संक्रमण भएको छ ।
त्यहाँ पछिल्लो २४ घण्टामा मात्रै ७९३ जनाको मृत्यु भईसकेको छ भने ६ हजार २८८ जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन् ।
मेक्सिकोमा १ लाख ४४ हजार ४४८ जना स्वास्थ्योपचार पछि निको भएका छन् भने ३७८ जनाको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर रहेको छ ।
त्यस्तै चीनमा आज थप १२ जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन् । चीनमा अहिलेसम्म ४ हजार ६३४ जनाको मृत्यु भएको छ भने ८३ हजार ४३० जनालाई संक्रमण भएको छ । त्यहाँ ७८ हजार ४२८ जना स्वास्थ्योपचार पछि निको भएका छन भने १० जनाको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर रहेको छ ।
त्यस्तै पाकिस्तानमा अहिलेसम्म ३ हजार ७५५ जनाको मृत्यु भईसकेको छ भने १ लाख ८८ हजार ९२६ जनालाई संक्रमण भएको छ ।
त्यहाँ ७७ हजार ७५४ जना स्वास्थ्योपचार पछि निको भएका छन् भने ३ हजार ३३७ जनाको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर रहेको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा त्यहाँ ३ हजार ८९२ जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन् भने ६० जनाको मृत्यु भएको छ ।
त्यस्तै बेल्जियममा अहिलेसम्म ९ हजार ७१३ जनाको मृत्यु भईसकेको छ भने ६० हजार ८१० जनालाई संक्रमण भएको छ ।
त्यहाँ १६ हजार ७७१ जना स्वास्थ्योपचार पछि निको भएका छन् भने ४२ जनाको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर रहेको छ ।
त्यस्तै नेदरल्याण्ड्समा अहिलेसम्म ६ हजार ९५ जनाको मृत्यु भएको छ भने ४९ हजार ७२२ जनालाई संक्रमण भएको छ ।
त्यस्तै स्विडेनमा ५ हजार १६१ जनाको मृत्यु भईसकेको छ भने ६० हजार ८३७ जनालाई संक्रमण भएको छ । त्यहाँ १९३ जनाको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर रहेको छ ।
बितेको २४ घण्टामा ९३० जनाको कोरोनाको कारण ज्यान गएको छ भने १३ हजार ७०९ नयाँ संक्रमित थपिएका छन् ।
बिहेमा बेहुली रुँदा-रुँदै हृदया’घात भएर मृ’त्यु ।?? RIP पुरा पढनुहोस??